Crafts maka ụmụaka - Crafts On | Crafts On (Peeji nke 3)
Crafts maka ụmụaka
Esi mee ka eserese foto site na ice cream osisi
Nkọwa na usoro iji mee ka foto foto na osisi ice cream mee. Ọ dị mma ime na ụmụaka, ma hazie ya ka ọ masị gị!
Otu esi eme tubili nke mposi akwukwo
Anyi na eji aka nka tinye kaadiboodu nke mposi umuaka ma ugbua aga m akuziri unu ...
Oke nwa na kaadiboodu nke akwukwo mposi
Mụ anụmanụ bụ ndị enyi kachasị amasị ụmụaka. Na nke a, m ga-akụziri gị otu esi eme òké ...
Straws mobile iji ụmụaka chọọ ụlọ ahụ mma
Mụta otu esi egweri ahihia ma mee mobile di egwu. Ọ bụ ọrụ dị mma ma ọ bụrụ na ị nwere ụmụntakịrị, nke ha ga-eji kporie ndụ.
Kaadị ekeresimesi maka umuaka nwere snowman
Christmas na-abịa na nke a post m ga-egosi gị otu esi eme nke a kaadị ọchị snowman-ekara. Ọ dị mma ịme ya kachasị Mụta otu esi eme kaadị Keresimesi a n'ụdị onye snow iji kelee ndị ezumike na ndị ezinụlọ gị niile ezumike ahụ.
Eva roba clown iji chọọ ụmụaka mma
Clowns bụ ihe odide na-apụta n'ọtụtụ nnọkọ. Na nke a, m ga - akụziri gị otu esi eme roba eva zuru oke iji nye mmetụ mbụ ka ị mụta otu esi eme odo odo a iji chọọ akụkụ ọ bụla nke oriri gị ma ọ bụ onyinye ụbọchị ọmụmụ ụmụaka, ha dị oke mma.
Kaadị ekele ụmụ maka ụbọchị ọmụmụ
Birthbọchị ọmụmụ bụ nnukwu oriri ụmụaka iji kpọọ akwụkwọ ịkpọ oku ma ọ bụ kaadị dị ka ndị a. Ọ bụrụ na ị nwere enyi ma ọ bụ onye òtù ezinụlọ nke nwere ụbọchị ọmụmụ, nọrọ Mụta otu esi eme kaadị a ma ọ bụ ịkpọ oku maka ụbọchị ọmụmụ ụmụaka, ọ dị oke mma na nke kachasị mkpa, ọ bụ gị mere ya.
Kù maka ịsa ahụ nwa ma ọ bụ nwata nwoke
Na nke a, m ga-akụziri gị otu esi eme oku a n'ụdị karama mara mma iji mee ememme mmiri ozuzo ma ọ bụ oriri baptism wee nye ya Mụta otu esi akpọ oku a maka ịsa ahụ nwa ma ọ bụ baptism n'ụdị a karama mbụ karama ka iju gị ọbịa.
Esi mee ka a 3 na esepu Piggy na eva roba
3 n'usoro bụ egwuregwu ọdịnala nke ụmụaka nwere mmasị dị ukwuu n'ihi na ọ dị mfe ma dịkwa mfe igwu egwuregwu. Na nke a, m ga-akụziri gị otu esi mụta otu esi eme nke a 3 n'usoro dịka ezi na eva roba, egwuregwu dị mma maka ụmụntakịrị nọ n'ụlọ ahụ, ha ga-ekpori ndụ ọtụtụ !!!
Otu esi eme Hawaiian site na imegharị akwụkwọ mposi
Na nke a, m ga-akụziri gị otu esi atụgharị paịpụ akwụkwọ mposi katọn ma tụgharịa ha na Hawaii a nke nwere ike ịchọ ụlọ gị mma n'oge ọkọchị. Ọ bụ ihe Mụta iji mee ka ụlọ mposi a ma ọ bụ akwụkwọ mposi ma ọ bụ akwụkwọ kichin wee chọọ ụlọ gị mma na-enye ya mmetụta na-adọrọ adọrọ, nke dị mma maka ụmụaka.
Uzo esi emekota ihe nkpuchi site na nbudata CD
N'ime nkuzi a, m ga ewetere gị echiche ịmegharị ma ọ bụ jigharị CD gị na DVD ochie gị. Na nkuzi a, ewetara gị otu echiche ịmegharị ma ọ bụ jigharị CD gị na DVD ochie gị site na ịmepụta onye nhazi frog.
Otu esi eme ka ụgbọ mmiri paireti na-emegharị ihe mkpuchi maka ụmụaka
Pirates bụ ihe odide nke obere ụlọ ahụ hụrụ n'anya n'ihi na ha bụ akụkụ nke ihe nkiri na ọkacha mmasị ha kachasị amasị ha nke ha na-ahụkarị Mụta ime ụgbọ mmiri a nke na-ese n'elu mmiri na-emegharị mmiri, ọrụ zuru oke maka obere ụlọ.
Egwuregwu agụmakwụkwọ iji mụta nọmba maka Childrenmụaka
Mụ nọmba ahụ bụ otu ọrụ mbido n'isi ụmụaka nwere. Na nke a, m ga-akụziri gị otu esi eme egwuregwu agụmakwụkwọ ka ị wee mụta ịme egwuregwu egwuregwu a ka ụmụ ntakịrị nọ n'ụlọ wee nwee ike iburu nọmba site na 1 ruo 8 n'isi n'ụzọ dị egwu.
Keychain na hama chaplet ozi m hụrụ gị n'anya
Muta otu esi eme nkpu ugodi a na hama beads, zuru oke ichoro igodo gi ma obu azu paaki ma buru oke ka gi na umuaka mee.
Otu esi eme azu azu roba maka akwarium umuaka
Muta otu esi eme oke azu ndia ichoro ime umu aka ma mekwaa aquarium mara mma nke ukwuu na akuku ulo gi obula.
Foto etiti maka oge okpomọkụ. Ọ dị mma maka ụmụaka
Mụta otu esi emebe foto foto oge anwụ a na ihe eji emegharị emegharị, ọrụ zuru oke maka ụmụaka ezumike a.
Summer eva roba pensụl ikpe maka ụmụaka
Mụta otu esi eme akwa eva roba maka oge ọkọchị iji tinye ụcha kachasị amasị gị ma ị nwere ike were ya gaa n'akụkụ osimiri wee see.
Otu esi eme egwuregwu umuaka azu
N'ime nkuzi a, m na-egosi gị otu esi emepụta egwuregwu efere azụ. Ọ nwere ụdị azụ azụ nke enwere ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ silhouettes nke anụmanụ mmiri, nke site n'enyemaka nke mkpanaka ị nwere ike ịga ịkụ azụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ka esi eme ya ma tinye ya n'ọrụ, nọrọ ma hụ usoro a site na nzọụkwụ.
Otu esi eme kalịnda ụmụaka - Nzọụkwụ site na nka
N'ime nkuzi a, a na m akuziri gị otu esi emepụta kalenda ụmụaka, nke zuru oke maka ụmụntakịrị ka ha mụta ihe n'ụzọ na-atọ ọchị na nke okike ụbọchị, izu na ọnwa nke afọ. Ọ dị mma ime na klaasị ma ọ bụ n'ụlọ maka ụlọ ụmụaka.
Otu esi eme Roses na akwụkwọ akụkọ n’ụzọ dị mfe
-esi mee Roses na akwụkwọ akụkọ na ụzọ dị mfe. Ọ dị mfe na anyị nwere ike ịme ya na ụmụaka ma jiri ya chọọ onyinye wee mee ka ha nwee mmetụta na ya.
Ngụsị akwụkwọ. Ikwiikwii Eva roba na ngwa agha
Mụta otu esi eme ikwiikwii a na-ekpo ọkụ eva na okpu maka ememme ngụsị akwụkwọ ma nwee nkọwa mara mma na nke mbụ na nwa akwụkwọ.
Esi mee ka ọba foto site na ice cream osisi
N'ime nkuzi a, anyị ga-eji foto ice cream mee mbadamba foto, osisi ndị dị larịị ma ọ bụ nke a makwaara dị ka osisi lolly.
Akwụkwọ ịde mma ejiri eva roba chọọ ụmụaka
Mụta otu esi achọ akwụkwọ ndetu dị mfe mma ma gbanwee ya na ezigbo eserese akwụkwọ maka ụmụntakịrị iji mepụta ihe okike ha.
Invitationmụaka kaadị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ
Mụta otu esi eme kaadị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ a ma ọ bụ ịkpọ oku, zuru oke ịkpọ ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị oriri na ọ toụ ,ụ, ha ga-ahụ ya n'anya.
Nzọụkwụ iji mee ihe nrite maka Motherbọchị Ndị Nne
N'ime nkuzi a, a na m akuziri gị otu esi emepụta akara akwụkwọ, zuru oke iji mee ụmụaka. Ugbu a thatbọchị ndị nne dị nso, ị nwere ike hazie ha ka ha nye nne gị nke ọ bụla. Ha nwere ike inye ya aha ma ọ bụ ahịrịokwu, ma jiri agba ọ bụla ha chọrọ.
Otu esi eme akwụkwọ ịkpọ oku maka baptizim ma ọ bụ ịsa ahụ nwa
Mụta otu esi akpọ oku a nke ọma maka baptism ma ọ bụ ịsa ahụ nwa wee nye ndị ọbịa nke emume gị, ha ga-ahụ ya n'anya n'ezie.
Otu esi eme ka okuko si na kaadiboodu. Ntughari
Mụta otu esi eji ọkụkọ mee akwa ya na akwa ya nke ọma iji chọọ ụlọ ihe nkiri ụmụaka, ime ụlọ ma ọ bụ akụkụ ọ bụla nke ụlọ akwụkwọ mma.
Etu esi eme ngwa ngwa na mpempe akwukwo nkpuru osisi
Maka oge opupu ihe ubi, okooko osisi dị egwu na mgbidi na ọnụ ụzọ. Site na nkuzi a ị nwere ike iji otu akwụkwọ mee nha na agba ịchọrọ, mana ọsịsọ. Ọ dịkwa mma ime ụmụaka.
Easter Bunny, dozie onwe gị swiiti igbe na-enwe ya njikere maka a Ista.
Taa ka m bịara gosi gị otu ị ga - esi akwadebe onwe gị swiiti igbe: Ista ewi. Ebe umu nke ulo, na mgbakwunye inwe ike itinye akwa chocolate, ga-enwe ezigbo oge ime nka a.
3 MGBE ỌR E ỌR OF NKE ORIGAMI NA AN AN, KMIDSAKA ỌRIAL
N'ime nkuzi a, ewetara m gị 3 echiche dị mfe iji mepụta ọnụ ọgụgụ origami, nke zuru oke ịmalite iwebata usoro a maka ụmụaka. Just ga-achọ ihe akara agba yana akwụkwọ.
Mara kaadị maka usọrọ ụbọchị nna
Muta otu esi eme kaadi a ka emee ubochi ndi nna ma ju gi anya site na ihe mara mma ma di mfe ime.
Esi see ikwiikwii na usoro na-adịghị mma. Naanị ihe isii ka ị ga-eme ka ọ dị njikere!
Esi see ikwiikwii na usoro na-adịghị mma, jiri kaadiboodu ojii na pensụl ọcha. Isoro usoro isii ndị a, ị ga-emezu ya.
Etu esi eme eji esere mmiri na kaadiboodu mee ihe umuaka
Muta otu esi eme umuaka umuaka a site na imeghari kaadiboodu icho mma n’akuku ulo gi ma nye ya ihe mbu.
Obere oke mere nke roba roba ka ezé gi ghara idi
Mụọ otu esi eme ka ezé ezé a zuru oke bụrụ akụkọ ifo maka ụmụaka nọ n'ụlọ ebe ha ga-ezé ezé mgbe ha dara.
Ikuku maka ọnụ ụzọ ụmụaka. Mee ka ime ụlọ gị dị mma
Na nke a, m ga-egosi gị otu esi eme ka ọnụ ụzọ ụmụ a zuru oke chọọ ụlọ nwoke ọ bụla ma ọ bụ nwa agbọghọ mma.
Inepo kaadị ịhụnanya pigs maka ụmụaka
Muta otu esi eme kaadi a maka ubochi inepo, zuru oke ime ya na umuaka nwere ezi ezi.
N'ime nkuzi a, ewetara m gị echiche atọ iji mee ya na klọọkụ ma ọ bụ nke akpọrọ crayons. Ha zuru oke ime ụmụaka, ọkachasị echiche nke mbụ na nke abụọ. Na nke atọ anyị na-eji akwa akwa igwe, mana na nlekọta nke okenye agaghị enwe nsogbu.
Origami maka Kidsmụaka - Akwụkwọ Nkịta Nzọụkwụ site Nzọụkwụ
N'ime nkuzi a, anyị ga-amụta usoro origami maka ụmụaka, ka ha nwee ike bido ya site na iji ọrụ dị mfe na ngwa ngwa.
Esi agba mkpịsị aka gị na mkpịsị aka gị
N'ime nkuzi a, anyị ga-ahụ otu esi ese ihe osise na mkpịsị aka gị, ọ dị mfe ma na-atọ ụtọ ma site na usoro nke ụmụaka nwere ike ịme ya n'ụzọ dị mfe
Otu esi eme akwukwo ozi nke ato maka umuaka
Mụta otu esi eme akwụkwọ ozi mbụ a iji jụọ ndị Magi maka onyinye kachasị amasị gị, ị nwere ike ịme ụdị 3 ahụ site na enyemaka nke ndebiri m hapụrụ gị.
3 osisi Krismas dị mfe iji ụmụaka mee
Mụọ otu esi eme ụdị osisi Krismas atọ a dị mfe iji chọọ ụlọ gị mma ma soro ụmụaka nwee ọ .ụ.
Recycling crafts maka ekeresimesi. Onye snow
Mụta otu esi eme snowman a, zuru oke iji chọọ ụmụaka ọ bụla nke ekeresimesi mma n’ụlọ
Mee kettledrum nke aka gị, jiri ite ụrọ
ka anyi lee ka esi eji timkpi kpoo timpani nke gi. Gbanwee ite ụrọ ka ọ bụrụ ngwa eji egwu ụmụaka.
Otu esi eme odo odo oji maka Halloween
-esi mee ka a nwa cat pusi maka Halloween, fun na-eme na ihe bara uru n'ihi na mgbe e mesịrị i nwere ike iji ya icho mma ma ọ bụ na-egwu ya.
Kaadị ụmụaka nke nnukwu anụ iji mee ememme Halloween
Muta otu esi eme kaadi umuaka zuru oke iji mee ememme Halloween ma juo enyi gi anya.
Ihe edeturu ụmụaka maka ụmụaka nwere eva roba na òké
Mụọ otu esi eme ihe njide ihe a dị ka oke iji chọọ ụlọ gị mma ma echefula ihe ọ bụla gbasara ụlọ akwụkwọ, ọ nwekwara ike ịbụ ndọta.
4 echiche icho mma itienna - Special pụrụ iche na klas
N'ime nkuzi a, ewetara m gị echiche 4 dị mfe nke nwere nsonazụ mara mma ma na-adọrọ mmasị iji chọọ mkpịsị akwụkwọ wee kwadebe maka ịlaghachi na klaasị.
Eva roba okooko osisi
Mụta otu esi eme okooko osisi roba dị ka daisies ndị a na-eme egwuregwu na-atọ ọchị. Ọ dị mma maka ọrụ aka gị ma dịkwa mfe ịme!
Jiri akwa roba egwurugwu unicorn chọọ gị mma
Muta icho eji pensụl gị eva Rain unicorn icho mma, ị ga-enye ya ezigbo mmetụ mbụ na azụ ụlọ akwụkwọ.
4 Echiche iji mepụta BOOKMARKS Ma ọ bụ BOOKMARKS
N'ime nkuzi a anyị gosipụtara gị 4 echiche dị iche iche ka ị nwee ike ịmepụta ibe edokọbara gị ma ọ bụ ibe edokọbara, zuru oke maka ịlaghachi na klaasị.
Akpa Unicorn iji chọọ ndị ọzọ ụtọ
Mụta otu esi eme akpa unicorn a zuru oke ma ọ bụ envelopu iji chọọ ndị ọzọ mma ma jupụta ha na ato uto ma ọ bụ kaadị ekele
Kaadị mbelata nke ụmụaka iji kpọọ oriri na oge ezumike
Muta otu esi eme kaadi a zuru oke maka oge opupu ihe ubi nke nwere oke uto na umuaka iji kpoo mmadu ka gi na ndi ozo.
Otu esi eme ka SHIME SHIME na-egwu ma na-achọ mma
Na nkuzi ahụ anyị na - akuziri gị otu esi emepụta slime shake. Ga-amụta ma otu esi eme slime na ...
Mgbaaka oge okpomọkụ, iji tinye aka aka ma ọ bụ nkwonkwo ụkwụ.
Taa, aga m egosi gị mgbaaka oge okpomọkụ, iji tinye aka aka gị ma ọ bụ nkwonkwo ụkwụ, ezigbo ngwa iji eyi n'oge a n'afọ.
Otu esi eme mkpirisi kawa ice cream
N'ime nkuzi a, m na-egosi gị otu esi emepụta peni kawaii ice cream. O zuru oke ugbu a na oge okpomọkụ na-abịa ime ụmụaka.
Otu esi eme ihe magnetị friji magnet
Mụta otu esi eme magnet a n'ụdị ice cream ma ọ bụ lolly iji chọọ friji ma ọ bụ friji n'ụlọ n'oge okpomọkụ a na ụfụfụ eva.
Emoji clipboard na eva roba maka ụlọ akwụkwọ
Muta otu esi eme folda emoji a ma obu ihe nlere anya nke oma iji gaa ulo akwukwo ma tinye ihe ndetu gi na isi okwu gi.
Eriri igodo atụrụ na pompoms maka ụmụaka
Mụta ime igwe eji eme atụrụ eji eji pompoms eme ihe n'ụzọ dị mfe, ọ dị mma ịme akpa ụmụaka mma.
Etu esi eme akwukwo akwukwo nnabata umuaka
Taa, m wetara gị ọrụ dị mfe ị ga-ahụ n'anya: anyị ga-ahụ otu esi eme mpempe akwụkwọ nnabata mmiri na ụmụaka.
Otu esi eme akwa nsị na roba eva chick
Muta otu esi eme akwa Ista a ka ichoro ulo akwukwo ma obu ulo gi ichota agba nke kachasi nma gi nma icho akwa gi.
Etu esi eji ichi icho icho ụgbọ mmiri - Ihe aka umuaka
N'ime nkuzi a, m na-akuziri gị otu esi achọ mkpuchi nke ụgbọ mmiri ihu ihu hippopotamus, nke mere na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ.
Pọọsụ kaadị iji nyefee n'ụbọchị Nna
Mụta otu esi eme kaadị a n'ụdị obere akpa iji nye n'ụbọchị Nna ma mee ka ọ bụrụ onyinye dị mfe na nke mbụ maka nna.
Eva roba na poselin posita inye ụbọchị nna
Mụta otu esi eme akwụkwọ ozi a maka ozi maka ụbọchị Nna yana nke gị ga-abụ nke izizi n'ọfịs.
Ihe nrite akwụkwọ iji nye ụbọchị nna dị mfe
Mụta otu esi eme ihe nrite a iji nye nna gị Daybọchị Nna, zuru oke maka nkọwa pụrụ iche na nke ọmịiko na nke mbụ
Ghichaa ma ọ bụ jiri afụ ọnụ kpochapụ ya ka ọ bụrụ onyinye nna
Mụta otu esi eme ka ahịhịa a ma ọ bụ jiri afụ ọnụ zuru oke nye n'ụbọchị Nna, ị ga-eju ya anya na ọ ga-ahụ ya n'anya.
Pen na soda nwere ike maka ụbọchị nna
Mụta otu esi eme pensụl a site na ịmegharị tin nke zuru oke iji nye nna gị ụbọchị pụrụ iche maka ya, ị ga-eju ya anya.
Etu esi eme azu umuaka na iko ite
Mụta otu esi eme ka mmiri azụ ụmụaka a zuru oke chọọ ụlọ ụmụaka mma ma ghara iburu ohere na-enweghị isi.
Mụọ otu esi eji akara osisi mee nke edere edere a nke ndi mmadu, nke zuru oke iji kaa akwukwo ulo akwukwo umuaka anyi
Mụta otu esi eji akwa ma ọ bụ fomy roba mee ka pensụl pensụl ụmụaka a, zuru oke iji chọọ tebụl nke ụmụaka dị n'ụlọ ahụ mma.
Otu esi eme kazoo ka egwu egwu na Carnival
Mụta otu esi eme ka carnival a ma ọ bụ kazoo bụrụ ihe egwu ga-adị mma maka ụmụaka igwu egwu na nnọkọ ndị a
Otu esi eme ma obu ndi eji eme ulo - Donuts na cupcakes
N'ime nkuzi a, a na m akuziri gị otu esi eme ụlọ ma ọ bụ ehicha ụlọ, yabụ ị nwere ike iji aka gị mee ya ma jiri ihe dị mfe ịchọta.
Etu ị ga - esi jiri aka gị mee ngwakọ anụmanụ nke na - adọkpụ, nke ukwu.
N'ime nkuzi a, m na-egosi gị otu ị ga - esi jiri aka gị mee ngwakọ anụmanụ na - agwakọta nke ọ bụla ka ọ pụta na ngwakọta nke anụmanụ
Egwurugwu unicorn iji chọọ ọrụ aka ụmụ anyị
Muta otu esi eme egwurugwu zuru oke nke unicorn iji nye na oge puru iche ma obu icho mma aka anyi.
Otu esi eme aturu umuaka site na Fimo ma obu polymer polymer
N'ime nkuzi a, egosiri m otu esi eji Fimo ma ọ bụ polymer ụrọ eme atụrụ atụrụ. Zuru oke maka ime ụlọ ụmụaka.
Eva roba na nnụnụ akwụkwọ iji chọọ ime ụlọ ụmụaka mma
Mụta otu esi eme obere akwụkwọ nnụnnụ a na eva roba iji chọọ ime ụlọ ụmụaka mma, ọ ga-adị mma ịme ụmụaka na nka.
Envelope-card with egwuregwu ụmụaka na obi inye na givepo Day
Mụta otu esi eji envelopu ejiri obi ị nwere ike iji dị ka kaadị yana ebe ọ nwere anụ ọhịa bea ọ zuru oke maka ụbọchị Valentine inwe nkọwa pụrụ iche.
Elephant card with obi iji nye onyinye n’ụbọchị Valentine
Muta otu esi eme kaadi Valentpo withpo a na enyí na-ebu balloons obi, zuru oke ime ya na umuaka.
Ọdụm akara edere na roba roba maka ụmụaka
Mụta otu esi eme akara edokọbara a dị ka ọdụm nke nwere roba roba nke ga-atọ ụmụaka ụtọ n'ụlọ gị ịchọ akwụkwọ ha mma.
Minions obi kaadị maka inepo
Muta otu esi eme kaadi nke a na ihu ndi Minions nke umuaka n’ime ulo gha acho
Eva roba pen iji nye ụbọchị enyi
Mụọ otu esi eme pensụl eva roba na bea iji nye ụbọchị ọbụbụenyi na ịhụnanya maka onye pụrụ iche
Otu esi eme ka akara edezi roba roba maka umuaka
Muta otu esi eme ibe edokwubara eva roba dika udi nke ladybug, zuru oke maka umuaka ndi no n’ulo icho akwukwo ha mma.
Okpokoro EVA na-acha odo odo maka ekeresimesi
Mụta otu esi eme ka eva eva roba na udi nke inyeaka iji chekwaa agba na pensụl gị na ekeresimesi n'ụdị mbụ.
Ihe onyinye ekeresimesi eji eme umuaka
N'ime nkuzi a, aga m egosi gị otu esi emepụta akara ngosi onyinye ekeresimesi zuru oke iji mee ụmụaka mgbe Christmas bịara.
Mee N'onwe Gị n'ụlọ Kumihimo diski
Na nka nke taa, anyi ga eme KIYhimo diski eji eme ulo. Nwere ike ịme ọtụtụ ihe ịchọrọ na oke ị chọrọ,
Kaadị Krismas n'ụdị ụlọ chocolate
Mụta otu esi eme ka kaadị ekeresimesi a n'ụdị ụlọ chọkọleti, nwee ike ịkele ezumike dị n'ụzọ mbụ.
Obere ụlọ gnomes, goblins ma ọ bụ akụkọ ifo
Jiri uda, elves ma ọ bụ akụkọ ifo wuo obere ụlọ a iji mejupụta ụlọ ụmụaka na echiche efu ma chọọ akụkọ ha mma
Dị mfe eva ma ọ bụ foamy roba musical ikpe maka ụmụaka
Muta otu esi eme egwu a roba n'ike mmụọ nsọ, nke dị mma maka ndị na-egwu egwu ma ọ bụ ụfụfụfụfụfụfụ
EVA ma ọ bụ ụfụfụfụfụ roba dị ka òké maka pensụl gị
Mụta otu esi eme ka ikpe a jiri eva roba mee, dị mma iji tinye pensụl agba gị ma ọ bụ ka ịchebe ihe nzuzo kachasị mma nke ụmụaka
Ibe akwukwo umuaka umuaka nke roba
Children'smụaka ibe edokọbara ndị a dị mma iji chọọ akwụkwọ gị mma, ejiri roba na bọtịnụ mee ụfụfụ, nke mbụ maka tebụl gị.
Halloween. Frankenstein swiiti akpa
Mụta otu esi eme akpa swiiti ndị a maka ụmụ ntakịrị ka ha wee rịọ maka swiiti ọtụtụ ma nwee ọ ofụ dị ukwuu.
Dị mfe kaadiboodu na eva roba ụmụ oke
Mụta otu esi eji roba roba na kaadiboodu mee oke oke a iji chọọ ụlọ nke obere ụlọ ahụ mma, ha bụ ihe mbụ.
Otu esi eme kaadi Halloween
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmasị Halloween a, nyefee kaadị Halloween ndị a, ị ga-eju ndị ọbịa gị anya. Rịba ama nzọụkwụ site na nzọụkwụ.
Black eva roba cat ka icho mma gị na Halloween ọzọ
Mụọ otu esi eme pusi ojii eva roba zuru oke iji chọọ oriri gị Halloween mma, ọ ga-adị mma n'akụkụ ọ bụla nke ụlọ gị.
Tosụ ka icho mma gị na Halloween ọzọ dị mfe
Mụta otu esi eme ụgbụ a, nke kachasị mma iji mee ememme Halloween gị ka ọ bụrụ nke ọma ka ụlọ gị nwee ụjọ na agbata obi.
Pac-Nwoke Pac-Man. Ibe edokwubara maka umuaka nwere eva roba
Mụta otu esi eme akara edokọbara a dabere na pacman ma ọ bụ pac-man egwuregwu vidiyo site na 80s, n'ezie ị ga-ahụ n'anya ịme ya.
Dị mfe kaadị Halloween
Mụta otu esi eme kaadi Halloween a na ugu nke zuru oke maka nka na ụmụaka na maka oriri egwu
Kawaii nka. Eriri nri kuki
Mụta otu esi eme ka ihe ntanetị nke nwere kawaii na eva roba dị mfe. Nsonaazụ dị mma, dị izizi ma dịkwa ọsọ ọsọ ịme.
Okpueze maka ụbọchị ọmụmụ ụbọchị ụmụaka
Ọ dịghị ihe mara mma karịa iji otu ehihie soro ụmụaka egwu egwu, yabụ taa anyị ewetara gị ezigbo echiche mbụ, otu esi eme obere okpueze maka ụbọchị ọmụmụ ụmụaka.
Otu esi eme mpempe akwụkwọ Ballerinas - Ọrụ aka ụmụaka
N'ime nkuzi a, egosiri m gị otu esi emepụta ibe edokwubara ballerina nke ejiri ezigbo ego na ihe dị ọnụ ala. Zuru okè ime na ụmụaka.
Obere vidiyo etubere ugo na eva roba okooko osisi
Obere vidiyo na ụlọ m hụrụ n'anya. Mgbe obula m garuru ulo ahia buru ahia zuru ...
Nnukwu swiiti na iko plastik
Mụọ otu esi eme igbe swiiti a yiri anụ ọhịa maka emume Halloween ma ọ bụ oge ọ bụla pụrụ iche. O doro anya na ị hụrụ ya n'anya.
Pokeball keychain. Pokemon na-aga
Muta otu esi eme ugodi a na udi pokeball site na pokemon ka icho igodo gi ma obu azu akpa gi ma gosiputa oru gi na ulo akwukwo.
Nkata nwere iko plastic dị mfe
Mụọ otu esi eji karaba mee nkata ndị a maka emume pụrụ iche ma ọ bụ oriri ụmụaka. Nsonaazụ bụ nke izizi.
Ifuru yiri udi
Ọ dịghị ihe mara mma karịa ịhapụ ndị ọbịa gị ka afọ ojuju, n'ihi na nkuzi a nke igbe yiri ifuru dị mma iji nyefee ncheta ụbọchị ọmụmụ.
Igwe nju oyi maka oge ọkọchị
Mụta otu esi eji ichoro oge okpomọkụ ndị a n'ụdị ice cream chọọ icho gị mma. Super dị mfe na nsonaazụ dịka ị pụrụ ịhụ dị ukwuu!
Achịcha Cupcakes maka ụmụaka
Muffins ma ọ bụ cupcakes bụ ihe eji megharịa ọnụ nke afọ ndị na-adịbeghị anya nyegoro ọtụtụ ihe maka. Anyị nwere ike…
Otu esi eme akpa ncheta maka omumu
Mụta otu esi eme akpa ncheta ụbọchị ọmụmụ na ụzọ dị oke egwu, dị mfe ma dịkwa ọnụ ala. Hụ usoro zuru ezu site na nkwụsị site na nkwụsị.
Eva roba ifuru mgbanaka
Muta otu esi eme ihe ndi a di mfe ma dikwa nma nke oma. Ikpokọta ha otú ị chọrọ na-eme dị iche iche ụdị.
Ibe akwukwo akwukwo
Jiri mpempe akwụkwọ dee mpempe akwụkwọ a. A oké echiche iwerekwa gị scrapbooking ihe na iberibe akwụkwọ.
Mkpịsị aka mkpịsị aka. Nwa nkịta nnụnnụ
Mụta ime nkịta ndị a ma ọ bụ obere mkpịsị aka na eva roba nke ụmụntakịrị nọ n'ụlọ ga-ahụ n'anya. Ha bụ ndị mbụ na mfe.
Nwa mkpịsị aka. Jellyfish puppet
Mụta otu esi eme puppet a ma ọ bụ mkpịsị aka aka gị kacha mma iji kọọrọ ụmụaka akụkọ banyere oke osimiri na ọ dị mfe ịme.
Otu esi eme mgbaaka
N’ime ọrụ aka a anyị ga - ahụ otu esi eme mgbaaka n’ụzọ dị mfe ụmụaka nwere ike ịme ma nwee ike iso ha rụọ ọrụ n’oge ọkọchị a.
Ibe edokwara anụmanụ. Nnọọ mfe frog
Ibe edokwubara roba Eva bu ihe di mfe ime ma umuaka huru ha n'anya. Oge a ...
Mgbaaka dị mfe na nkeji abụọ
N'ime ọrụ a, anyị ga-ahụ otu esi eme mgbaaka dị mfe na ụmụaka na nkeji abụọ wee gosi ụfọdụ ụmụ bebi na-atọ ụtọ n'oge okpomọkụ a.
Paintingmụaka urukurubụba eserese
Muta otu esi eji efere plastik di mfe icho umuaka nwanyi aru. Ihe ga-esi na ya pụta ga-eju gị anya.
Gbọ elu nwere osisi
Jiri mkpara osisi wuo ụgbọ elu a nke mbụ na ọ dịrị ụmụntakịrị nọ n'ụlọ ahụ ezigbo oge.
Otu esi eme UFO ka icho mma ma obu igwu egwu
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi emepụta UFO yana ihe dị ọnụ ala ma dịkwa ọnụ ala. Ọ dị mfe ịme ọ ga - abụkwa ihe ịchọ mma na ihe egwuregwu ụmụaka.
Butterfly na mpịakọta akwụkwọ mposi
Mụta otu esi egweri akwụkwọ mposi na-apụta ma gbanwee ha n'ime urukurubụba mara mma.
Eva roba anyụ pendant
Mụta otu esi emebe ihe mmiri a zuru oke maka ụmụaka nwere ụfụfụ eva. Ha ji n'aka na ha ga-ekpori ndụ ma ọ na-enye ezigbo onyinye.
Akwụkwọ ndekọ ụmụaka
Anyị ga-eme ụfọdụ akwụkwọ ndetu maka ụmụaka, n'ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe, ihe kachasị mma bụ na obere ụlọ nwere ike ịme ha.
Vagbọ ala eva roba
Muta otu esi eme ndokwa edetu zuru oke nke roba maka umuaka dika ihe eji eme ihe. Ha ji n’aka na ha hụrụ ha n’anya maka akwụkwọ ha.
Akpa obi maka oriri
Mụta otu esi eme akpa ndị a n'obi maka nnọkọ oriri nke obere ụlọ. Zuru okè maka ụbọchị ọmụmụ na oge ọ bụla.
Caterpillars na mkpachị na pompoms
Muta otu esi eji otutu uzo na uwe eji eme akwa caterpili ndi a. Ihe ga-esi na ya pụta ga-adị ukwuu. Na-amaja ??
Akwụkwọ nnukwu anụ
Muta otu esi eme udiri akwukwo akwukwo ndi a maka umuaka. Ha ji n'aka na ha hụrụ ya n'anya ma nwee nnukwu oge. Ha dị nnọọ mfe.
Evamụaka eva roba azu
Muta otu esi eme azu azu a. Ọ bụ ezigbo ọrụ iji mee ụmụaka na nsonaazụ ya bụ ihe dị egwu !!!
Otu esi eme akwukwo kuki nke akwukwo
Muta otu esi eme kuki ndi ozo a ma ama, di nma maka onyinye ma jiri dika ncheta omumu.
Eva ikwiikwii roba coasters
Muta otu esi eme nkpu umuaka zuru oke maka umuaka nke ihe ikwiikwii jiri eji roba mee.
Octopus nwere ezigbo ọkpọ ọkpọ ọcha
Octopuses bu anumanu umuaka huru n'anya na oge a aga m egosi gi otu ...
Nna ụbọchị pụrụ iche: igbe igbe iji mee ụmụaka
Otu esi mepụta igbe ozi iji soro umuaka me okwu, ya na okwu “papa” maka ubochi nke Nna ma obu n’oge ozo.
Eva nwa nwoke na nwa agbọghọ roba ibe edokọbara
Ibe edokwubara eva ma obu foamy di nma iji mee ka umuaka rute uwa ogugu. Ama m…
Eva ma ọ bụ foamy roba keychain. Birdie
Taa, aga m akuziri gị otu esi eme nke a eva ma ọ bụ foamy keychain n’ụdị nnụnụ. O zuru oke…
Ibe edokwara Eva roba. Frog
Lovemụaka hụrụ ibe edokọbara n'anya. Mụọ otu esi eme frog a iji chọọ akụkọ na akwụkwọ ndetu gị mma.
Eva roba pensụl njide snail
Ihe nkedo pensụl a bụ nnukwu ngwa maka ụmụaka nọ n'ụlọ ahụ iji chọọ ihe ederede ha niile mma.
N'ime ọrụ taa anyị ga-ahụ ntụpụ ụkwụ site na otu esi eme spyglass ụmụaka site na ọkpọkọ kaadiboodu.
Ibe edokwubara nwere obere vidiyo
N'ime nkuzi a ị ga - ahụ otu esi eji ibe edokọbara jiri obere vidiyo nke aka anyị rụpụtara.
Winnie na pooh mere na fimo
Nkeji edemede ka a Winnie na Pooh na polima ụrọ. Ezigbo ọrụ iji soro ezinụlọ ma ọ bụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkpụzi ụrọ polymer.
Otu esi eme polyion ụrọ polymer
Nkeji edemede raara nye ihe nkiri Minions, n'ime ya, ị ga-ahụ nkuzi iji mee ka minion na-atọ ụtọ na ụrọ polymer.
Tiara India nwere ábụbà nwere agba
Tiara India na-egwu ma na-eji ejiji. Mere onwe anyị na kaadiboodu itienna na acha akwụkwọ. Inwe ezigbo oge ma nwee anụrị.
Akpadoro eserese foto maka ime ụlọ ụmụaka
Akpadoro eserese eserese maka ime ụlọ ụmụaka, ma ọ bụ nwata nwanyị ma ọ bụ nwata nwoke, anyị nwere ike ịhazi ụfọdụ foto foto na obere usoro.
Uwe pacifier njide
Ihe njide ihe mkpuchi akwa bu ezigbo ihe mgbakwunye iji jikọta ya na uwe nwa anyi ma obu onyinye nye nne di ime ma obu nwa.
Obere doudou nwere mmado.
A obere doudou iji nye ma ọ bụ maka nwa nke anyị bụ ezigbo egwuregwu ụmụaka ndị a na-ahụ n'anya, ederede na agba.
'Smụaka yiri mgbaaka na fimo fuguritas
Umuaka umuaka nwere ihe osise di iche iche di iche iche di iche iche ma nwekwa obi uto inye ha n’ememe ncheta omumu anyi ma o bu oriri.
Tlọghachi kom kom ọzọ iji gwuo egwu
Mkpọ tin na-egwu, ee! na obere ink na welara anyị nwere ike egweri ụfọdụ Mkpọ nke echebe ma na-atụgharị ha a ibu fun toy
Slippers ejiri aka mee maka ụmụaka
Sfọdụ slippers ejiri aka na-ese aka bụ ezigbo onyinye maka ụmụ anyị ma ọ bụ na ọ bụghị obere. Anyị nwere ike ịhazi akpụkpọ ụkwụ anyị dịka anyị kacha amasị.
Plastimake, plastik ị nwere ike ịdị
Edemede banyere ihe ohuru Plastimake. Ọ bụ plastik a na-akpụ mgbe ọ kpụ ọkụ n'ọnụ na mgbe ọ jụrụ oyi ọ na-esi ezigbo ike. Zuru oke maka nka.
Akpa ụmụaka nwere snap na ihe ndozi
A obere akpa na snap. Ọ dị mfe itinye ma jiri mmechi maka ụmụ agbọghọ. Ọ bụ ọrụ mara mma ime ụmụaka na ụlọ.
T-uwe aka na-ese aka na ịbịaru ụmụaka
T-uwe a na-eji aka ya na ihe osise ụmụaka bụ onyinye magburu onwe ya maka ụmụntakịrị nọ n'ụlọ. Itinye nlekọta na nraranye maka onyinye a zuru oke.
A na-achọ Pompero mma iji mee ncha ncha
Site na pompero a etinyere na ngwakọta iji mee ncha ncha zuru oke, anyị ga-ekpori ndụ ọtụtụ awa na ọnụ ala dị ala. Childrenmụaka ga-enwe mmasị igwu egwu.
Ncha egosipụta, ihe ngwakọta zuru oke
Ncha egosipụta. Kedu ihe bụ ihe ọchị? N'ime nkuzi a anyị gosiri gị otu esi eme ngwakọta zuru oke iji mee ka ncha ncha buru ibu ma sie ike.
Ejiri aka mee maka ụmụ agbọghọ
Mgbaaka maka ụmụ agbọghọ, ezigbo nkwado maka oge opupu ihe ubi a. Site na nkuzi a dị mfe ị ga - enwe ike ịme Mgbaaka niile maka ụmụ agbọghọ ị na - ekwu.
Esi esi agba akwụkwọ nri iji gwuo egwu ụmụaka
N'ime nkuzi a anyị na-akuziri gị otu esi esi esi esi esi agba mkpo, na -adị mfe, dị ọnụ ala ma na ole na ole ị ga-enweta ụzọ iji mee ka ụmụ gị nwee obi ụtọ ma nwee ezigbo oge.
Chinese na-ejegharị maka ụmụaka
N'isiokwu a, anyị gosiri gị otu esi eme ụdị oriọna ndị China. N'ụzọ dị otú a, anyị na-akụziri ụmụaka obere ọdịbendị ọzọ.
Ime anwansi iji mee ka Game nke n'ocheeze counters
Nka raara nye Fans nke osisi egwuregwu na Game nke n'ocheeze. Na nke a, anyị ga-egosi gị otu esi eme ngụkọta maka egwuregwu bọọlụ ọ bụla.
Ihe eji eme ihe maka umuaka
N’isiokwu a, anyị gosiri gị otu esi eme strol maka ụmụaka site na igbe kaadiboodu. Tozọ esi akụziri ụmụaka imegharị ihe.
Piggy akụ maka ụmụaka
N'isiokwu a, anyị gosiri gị otu esi eme plọg piggy maka ụmụaka maka naanị kaadiboodu. N'ụzọ dị otú a, ha nwere ike itinye ya ma wepụ ya mgbe ọ bụla ha chọrọ.
N'isiokwu a, anyị gosiri gị otu esi eme kaadị 3D mara mma nke kachasị nke mbụ maka oge ndị ahụ mgbe anyị nwere ike ịkpọ mmadụ òkù n'ụlọ.
Keychains na eva roba
N’isiokwu a anyị gosiri gị otu esi eme ọmarịcha igodo roba roba. Ya mere ụmụaka toro eto nwere ike ịnwe ngwa ahaziri iche maka igodo ha.
Ndị agha ji achọ mma eji osisi ude
N'oge ọkọchị ọ dị mma ịchekwa osisi ice cream iji mee ọrụ nka dị ka ụmụaka ndị a na-achọ mma ma na-atọ ọchị.
N'isiokwu a, anyị na-egosi gị otu esi eme kittens mara mma nke ejiri mmetụta mee ka nwa ahụ nwee anụ ụlọ.
Onye bu onye? ahaziri iche
N’isiokwu a, anyị na-akuziri gị otu esi eji egwuregwu aka nke aka anyị mee akụkọ ụmụaka. Onye bu onye.
Ndị Eze atọ nwere chọkọletị
Ke ibuotikọ emi anyị na-akụziri gị ka ị mee ụfọdụ dị mfe Ndị amamihe atọ nwere ụfọdụ ụtọ chocolate bonbons ịgagharị n'ụlọ. Akwa maka abalị ndị eze.
N’isiokwu a anyị gosiri gị otu esi eme ọmarịcha kaadị ekeresimesi maka Ekeresimesi Echi echi. Onyinye pụrụ iche ụmụaka nwere ike inye.
Bell na kọfị kọfị
N’isiokwu a, anyị gosiri gị otu esi eji igwe kọfị kọfị mee kọlị dị mfe. Ihe omuma di nma nye umuaka n'ime ulo.
Portal nke Betlehem
N'isiokwu a anyị na-egosi gị otu esi eme Portal Betlehem mara mma nke nwere ihe eji emegharị emegharị dịka igbe akpụkpọ ụkwụ. Ọrụ aka dabara adaba maka ụmụaka.
Biakwa obia Kalinda
Ke ibuotikọ emi anyị na-akụziri gị otu ị ga - esi mee kalịnda kalenda. Mere na obere recycled igbe na ụmụaka emee ka anya doo.
Osisi Krismas na nzu
N’isiokwu a anyị gosiri gị ọrụ dị mfe na ngwa ngwa iji mee katọns osisi Christmas wee chọọ ya mma dị ka bọọdụ maka ụmụaka.
Christmas ugbu a na kuki
N’isiokwu a anyị na-eweta ụzọ a ga-esi nye kuki n’oge ekeresimesi n’ụzọ pụrụiche. Ya mere, umuaka a ghuta ya.
Ọla ntị ndị ejiri rọba mee anwansi
Nkeji edemede raara nye nkowa na iji plastik anwansi, ihe bu ihe amaara ama n’ime iri asaa.
Ajị anụ pọmpụ
N’isiokwu a anyị gosiri gị otu esi eme akwa pompoms dị mfe iji kwalite ikike moto nke ụmụ ntakịrị. Ọrụ na-atọ ụtọ.
Kụziere ụmụ gị ịkpa ákwà
N'ime nkuzi a ị nwere ike ịkụziri ụmụ gị usoro dị iche iche iji meziwanye ikike ha. Na mgbakwunye, ha ga-amụta ịkwa akwa maka ọdịnihu.
Binoculars maka ụmụaka
N'isiokwu a, anyị gosiri gị otu esi eme binoculars dị egwu maka ụmụaka ejiri kaadiboodu mee ya ma jiri teepu washi chọọ ya mma.
Stamping bụ ọrụ nke ụmụntakịrị na-enwekarị mmasị na ya, yabụ anyị na-egweri mpịakọta nke teepu nrapado iji mepụta ụkwụ stampụ.
N'isiokwu a anyị na-ewetara gị ụfọdụ mara mma iko na akwụkwọ na-apụta na-eme ka a kediegwu tii set nke mere na onye ọ bụla nwere ike igwu dị ka ezinụlọ.
Ihe omimi na nkpuru osisi ice cream
N’isiokwu a anyị gosiri gị ụzọ ụmụaka ga-esi nwee ọ makingụ na-eme obere mgbaghoju anya na osisi ice cream, echiche dị iche iche nke egwuregwu.
Ngaji nwere nku
Oge ụfọdụ o siri ike inye ụmụaka nri, yabụ anyị na-egosi gị ebe ngaji a ka ha nwee anụrị mgbe ha na-eri nri. Simplezọ dị mfe nke ọchị.
Hazie pen na CD
Nkuzi banyere otu esi edobe pen site na iji CD ochie. Anyị ga-eji teepu ka ọnụọgụ CD ahụ zuru oke ma anyị ga-arapara na mkpịsị odee
Halloween ghosts na gauze
Ghosts bụ ihe a na-ahụkarị na emume Halloween, yabụ anyị na-eme ya ka ọ bụrụ ọrụ aka ejiri bandeeji gauze, yabụ anyị ga-enye ya ọtụtụ ihe mbụ.
Ugu ite maka ememme Halloween
Na Halloween ị na-achọkarị akpa ebe ị nwere ike itinye ihe ụtọ niile sitere na ndị agbata obi, yabụ anyị na-eweta ugu a mere karama gel.
Candy akpa maka halloween
N’isiokwu a anyị na-akuziri gị otu esi eme akpa dị ịtụnanya nwere ihe na ato uto maka mmemme Halloween ahụ, ụzọ izizi iji nyefee ha ụmụaka.
Ghost maka halloween
Ememe Halloween ahụ na-abịarukwu nso kwa ụbọchị ka ị wee nwee ike ịchọ akwa mmụọ, taa anyị na-akụziri gị otu esi eme otu.
Halloween ugu stampụ na akwụkwọ mpịakọta
Ugu bụ isi nri maka Halloween, mana ọ bụghị iri ya mana ịme ihe ịchọ mma, taa anyị na-akuziri gị otu esi eji akwụkwọ mpịakọta eme ha.
Bat na mposi akwụkwọ mpịakọta
N’isiokwu a, anyị gosiri gị ụsụ na-atọ ọchị nke ejiri akwụkwọ mposi tụgharịa iji mee ka ụjọ jide onye ọ bụla nọ n’ezinụlọ na abalị Halloween.
Ke ibuotikọ emi anyị na-egosi gị a fun egwuregwu na anyị nwere ike ime iji recycledon karama iji mee ka ụfọdụ na-akpa ọchị sumo Bowling maka ụmụaka.
Cobwebs na efere na agba, pụrụ iche halloween
Halloween dị n'akụkụ nkuku ma ị ga-amalite ịchọ nka iji mee ụmụaka. Lee, anyị gosiri gị otu ihe na-atọ ọchị.
Nọmba mgbakọ na mwepụ maka ụmụaka
Mgbakọ na mwepụ dị ezigbo mkpa maka mmụta ụmụaka, yabụ taa anyị na-egosi gị otu esi eji nọmba mgbakọ na mwepụ eme egwuregwu.
N’isiokwu a, anyị gosiri gị otu esi eme puppets mara mma maka ụmụntakịrị nọ n’ụlọ nwere iberibe kaadiboodu gburugburu ụlọ ahụ.
Akwa na ozi di egwu
N’isiokwu a anyị na-akuziri gị otu esi achọ akwa mma ma hapụ ozi n’ime ya maka onyinye ụbọchị ọmụmụ ọ bụla ma ọ bụ oriri ụmụaka ndị ọzọ.
DIY: 3 n’usoro maka ụmụaka
Egwuregwu egwuregwu dị mkpa maka mmụta ụmụaka, yabụ taa anyị na-akụziri gị otu esi eme ka ahịrị 3-in-a ahịrị nke mmetụta ụmụaka na-eto.
N’isiokwu a anyị gosiri gị otu esi eme nkata kaadiboodu dị ụtọ maka ụmụaka ụmụaka, ka ha nwee ike iburu ihe ha gaa n’ogige ahụ.
Azu egwuregwu maka umuaka
N’isiokwu a anyị gosiri gị egwuregwu egwuregwu ịkụ azụ na-atọ ụtọ nke ụmụaka ga-anụ ụtọ ya. Naanị obere obere nju ma nwee mmetụta.
Hazie pensụl gị
N'isiokwu a anyị na-egosi gị otu esi eme ka ọtụtụ pensụl gị na-enye ha ezigbo mmezi iji jiri ha mee ihe ọzọ.
Maracas maka ụmụaka
N'isiokwu a, anyị na-akụziri gị otu esi eme ọmarịcha mara mma maka ụmụaka maka ụmụaka, ebe ọ bụ na ha hụrụ mkpọtụ ọ bụla.
Aka ejiri akpa, laghachi n'ụlọ akwụkwọ!
N’isiokwu a, anyị ga-egosi gị ụfọdụ ikpe dị egwu ma maa mma nke ejiri aka mee ka ụmụaka wee jiri ịnụ ọkụ n’obi malite ụlọ akwụkwọ.
Elekere na lego iberibe
N'isiokwu a, anyị gosiri gị otu esi eji elekere Lego eme ihe ngosi dị egwu, nka iji soro ụmụntakịrị nọ n'ụlọ ahụ.
Akpa maka ụlọ akwụkwọ
N’isiokwu a anyị gosiri gị otu ị ga - esi mee ngwa ngwa wee mekwa akpa mara mma maka ụmụ ntakịrị ịlaghachi ụlọ akwụkwọ maka nri ụtụtụ.
Mee N'onwe Gị: ihe eji egwuri egwu maka nwamba
N'isiokwu a, anyị na-akụziri gị otu esi eme egwuregwu ụmụaka dị egwu maka nwamba, n'ụzọ dị otu a ha ga-eji ihe aka anyị ji anụ ụtọ.
Mee N'onwe Gị: Maracas nwere kọfị kọfị
N'isiokwu a, anyị gosiri gị otu esi eme ka ụmụaka bụrụ ihe egwuregwu na-akpali akpali. Marafọdụ maracas nke nwere naanị kọfị kọfị ole na ole.
DIY: Dominoes nwere nkume
N'isiokwu a anyị na-eme domino na-atọ ụtọ maka ụmụaka ejiri okwute si n'oké osimiri mee. Yabụ, anyị na-akụziri ha na okike na-enye anyị ohere iji ya rụọ ihe ụmụaka ji egwuri egwu.
N’isiokwu a anyị na-akuziri gị otu esi eme chalịl pụrụ iche n’ụlọ ka ụmụaka nwee ike nwee arịa ha ga-ese n’okporo ụzọ.
Ihe mgbagwoju anya na osisi ude
N'isiokwu a, anyị gosiri gị otu esi eme mkpọtụ pepa pig puzzle na sọks ole na ole. N'ụzọ dị otú a, anyị na-azụlite echiche.
Puppets na ngaji osisi
N’isiokwu a anyị gosiri gị otu esi eme puppy pupp maka ụmụaka nwere ngaji osisi dị mfe. Ọrụ aka ọrụ.
Ibe edokwubara na eva roba
N’isiokwu a anyị na-akuziri gị otu esi eme edokwukara ihe egwuregwu ka you ghara idafu eriri nke ọgụgụ akwụkwọ ọkacha mmasị gị.
Mee N'onwe Gị: Indianlọ ndị India nwere nzacha kọfị
N'isiokwu a, anyị na-egosi gị otu esi eme ụlọ Indian mara mma na nzacha kọfị. Nnukwu ọrụ iji kwalite nnagide n'etiti ọdịbendị.
Mee N'onwe Gị: Mgbaaka na eva roba
N’isiokwu a anyị na-egosi gị otu esi eji ọla roba arụ ọmarịcha ọla aka. Pụrụ iche maka oge okpomọkụ a.
Akwa akwa nwa bebi na kaadiboodu
N’isiokwu a anyị gosiri gị akwa akwa maka ụmụ bebi e ji kaadiboodu mee. N’ụzọ dị otu a, ụmụaka ga-enwe akwa nke ha begharịrị maka ụmụ bebi ha.
Anụmanụ dị n'oké osimiri na akwụkwọ mposi
N’isiokwu a anyị gosiri gị ụfọdụ anụmanụ mara mma mara mma ejiri akwụkwọ mposi mee. Nnukwu ọrụ iji soro ụmụntakịrị nọrọ n'ehihie.
Mee N'onwe Gị: ekwentị nwere iko yogọt
N'isiokwu a, anyị gosiri gị otu esi eme ụmụaka egwuregwu ụmụaka obi ụtọ site na ịghaghachi iko yogọt. A ụzọ na-akụzi imegharị ihe maka iji na a fun ụzọ.
Azu na akwa
N’isiokwu a, anyị ga-egosi gị ụfọdụ azụ na-atọ ụtọ na iberibe akwa dị iche iche.
Ihe eji achọ mma nke kaadiboodu
N’isiokwu a, anyị gosiri gị otu esi eji kaadiboodu mee ihe eji achọ ọ funụ. Ngwa eji achọ mma nke umuaka ga enwe obi uto ime ya.
Mee N'onwe Gị: Ezigbo Shawl na akwụkwọ anụ ahụ
N'isiokwu a anyị na-egosi gị otu esi eji akwa akwụkwọ eji eme akwa akwa. Ọrụ na-atọ ụtọ maka ụmụaka.
Ikwiikwii na-akpa ọchị na akwụkwọ cupcake
N'isiokwu a, anyị gosiri gị otu esi eme ikwiikwii na-atọ ụtọ site na akwụkwọ muffin, ụzọ ị ga-esi mata anụmanụ site na ịmegharị ihe n'ụlọ.
Miribe oriọna ya na kaadiboodu
N'isiokwu a anyị na-egosi gị otu esi eme ọmarịcha lantern. Ngwa pụrụ iche maka ụlọ ntu niile Andalusia iji chọọ mma ma nye ndụ.
Mee N'onwe Gị: Onyinye Oriri Nsọ na eva roba
N’isiokwu a anyị na-akuziri gị otu ị ga-esi nye onyinye akụ na ụba nke udo. A dị mfe na ngwa ngwa eva roba nwa bebi na-eme maka oge a nke udo.
Stoneschọ mma nkume na agba
N’isiokwu a, anyị na-akuziri gị otu esi eji oge ehihe na-atọ ụtọ ụmụaka soro ụmụaka see okwute na agba. Ihu ọchị na egwu.
Mee N'onwe Gị: Easter ewi na akwụkwọ mpịakọta
Ke ibuotikọ emi anyị na-akụziri gị otú ị na-eme a fun Ista ewi iji mezuo ihe omume dị mfe maka ụmụntakịrị nọ n'ụlọ a Ista.
Nsọ Week Hood
Ke ibuotikọ emi anyị na-egosi gị otú ị na-eme ka a ahụkarị Ista hundu. Ihe egwuregwu ụmụaka na-atọ ụtọ ma dịkwa mfe iji mee ezumike na ezumike.
Mee N'onwe Gị: Etu esi egbusi nsen Ista?
Ke ibuotikọ emi anyị na-egosi gị otú efu ahụkarị Ista na àkwá. Simplezọ dị mfe ma dịkwa ụtọ iji soro ụmụaka soro Ista na-atụrụ ndụ.
Idobe mmetụta balloons
N’isiokwu a, anyị gosiri gị otu esi eme balọns dị mma iji chọọ ụlọ nwatakịrị ahụ mma. A mara mma mobile na-egwu.
Daybọchị Nna nka: kaadị dị ka uwe elu
N’isiokwu a anyị hapụrụ gị ọmarịcha ọrụ aka maka ụmụaka ka ha mee n’ụbọchị Nna. N'ihi ya, ha ga-enwe ezigbo onyinye nye nne na nna ha.
Akwụkwọ mpịakọta akwụkwọ maka ụbọchị nna
Ke ibuotikọ emi anyị na-egosi gị a fun nka na akwụkwọ na-apụta maka Nna Day. Ọ dị mma maka ụmụaka ka ha nye papa ha.
N'onwe Gị maka ụmụaka, nka maka ụbọchị Nna
N’isiokwu a anyị gosiri gị ọrụ dị mfe maka ụmụaka nke ịmụ nwa maka ụbọchị Nna. Onyinye nye nna kachasị mma na kọfị kọfị.
Agụụ ụbọchị nna, Mee N'onwe Gị maka ụmụaka
N’isiokwu a anyị na-akuziri gị otu esi eme ọrụ maka Father'sbọchị Nna. Ihe njikọ pụrụ iche n'oge nna na-arụsi ọrụ ike ma na-ahụ n'anya na nwa ya nwoke.
Nna Day craft: clasped aka
Ke ibuotikọ emi anyị na-egosi gị a mfe nka maka ụmụaka na ụbọchị nke Nna Day. N'ụbọchị a ha ga-enye ndị mụrụ ha ihe ha mere.
Fans Andalusia maka ụbọchị Andalusia
N’isiokwu a anyị gosiri gị otu anyị nwere ike isi rụọ ọrụ aka maka ụbọchị Andalusia n’ime naanị nkeji ise. Fọdụ ahụkarị ndị Andalusia Fans.
Mee N'onwe Gị: Flag maka ụbọchị Andalusia
N’isiokwu a anyị na-akụziri gị otu esi eme ọrụ kwa ụbọchị maka ụbọchị Andalusia. A ga-efegharị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-acha ọcha na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ga-efegharị n’ụlọ akwụkwọ.
DIY: Carnival okpu, pụrụ iche maka ụmụntakịrị nọ n'ụlọ
N’isiokwu a anyị gosiri gị otu ị ga - esi mee okpu Carnival dị mfe ma na-atọ ọchị. Maka ụmụ ntakịrị jiri ejiji ma kwado ibe ha na ngwa a.
Nchịkọta onyinye na akwụkwọ mposi na-apụta
N'isiokwu a, anyị gosiri gị otu ị ga - esi jiri uru akwụkwọ mposi wee mee ụfọdụ onyinye onyinye. Ọmarịcha ụbọchị ọmụmụ.
Ihe nkpuchi Carnival maka umuaka
N’isiokwu a anyị gosiri gị otu ị ga - esi mee nkpuchi dị egwu Carnival maka ụmụaka. N'ụzọ nke a, anyị nwere ike ịme ezumike a dika ezinụlọ.
Gbọ elu nwere akwa uwe na osisi
N’isiokwu a anyị gosiri gị otu esi eme ụgbọ elu na-atọ ụtọ nwere ihe eji emegharị emegharị dịka akwa akwa ma ọ bụ osisi ice cream.
Aha ahaziri onwe ya na roba roba maka ime ụlọ ahụ
N’isiokwu a, anyị na-akuziri gị otu esi eji aha roba nwa mee aha nwa gị nwoke ma ọ bụ nwa gị nwanyị.
Nka maka umuaka: Nduru nke udo na katọn ọkpọkọ
N'isiokwu a, anyị gosiri gị ọrụ dị mfe maka ụmụaka, maka Udo Udo, ụbọchị ebe emume na-emeghị ihe ike n'ụlọ akwụkwọ niile.
Castanets maka ụmụaka
N’isiokwu a, anyị na-akuziri gị otu esi eme ụfọdụ castanets eji achọ ụlọ ma na-atọ ọchị maka ụmụaka, jiri kaadiboodu na ihe ọ drinkụ softụ dị nro.
Azu okpu maka ejị
N’isiokwu a anyị na-akuziri gị otu esi eme ọmarịcha nnukwu okpu maka ejị, dị ka nnukwu azụ si Cádiz, dịka ala ebe Carnival si.
Igbe nke nwere ude ude na eva foam
N’isiokwu a anyị gosiri gị otu esi eme igbe pụrụ iche iji chekwaa obere ọla gị. Naanị na osisi ice cream na eva gum, dị oké ọnụ ahịa !!.